UPDATE: Sicir barar xooggan oo ka dhashay Fayraska Corona oo ka jira magaalada Boosaaso – HalQaran.com
UPDATE: Sicir barar xooggan oo ka dhashay Fayraska Corona oo ka jira magaalada Boosaaso
April 1, 2020 April 1, 2020 Weriye Ahmed Abdi	0 Comments Sicir barar xooggan oo ka dhashay Fayraska Corona oo ka jira magaalada Boosaaso
Suuqa magaalada Boosaaso
Boosaaso (Halqaran.com) – Waxaa magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari ka jira sicir barar xoogan, oo ka dhashay xanuunka sida ba’an dunida ugu sii baahaya ee Coronavirus.
Qiimihii caadiga ahaa ee quutul daruuriga la kala siisan jiray ayaa maalmihii la soo dhaafay uu sare u kac ku yimid, taasoo si weyn looga dareemay Magaalada Boosaaso.
Duqa Magaalada Boosaaso ayaa sheegay in toddobadkan sicir barar xoogan laga dareemay Xarunta Gobolka Bari, taa oo ka dhalatay dalabaad badan oo ka imaanayay Gobolada Dalka.
Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan ayaa tilmaamay in ay horey go’aamo uga soo saareen inaanay badeecadaha qaali looga dhigi karin dadka danyarta ah.
Waxa uu intaa ku daray inay qorsheynayan kulamo ay doonayan inay la qaataan ganacsatada, si ay go’aano mideysan uga soo wada saaraan qiimaha la kala siiso bagaashka.
“Saddexdii iyo afartii maalmood ee ugu dambeeyay sicir barar xoogan baa jiray. Dhawr waxyaabood baa sababay, oo ay ugu horeyso dalabaad badan oo ka imaanayay Gobolada Somaliya oo idil. Barnaamijyadaas dowladda iyaduna go’aan bay ka soo saartay in badeecadaha la hakiyo, in badeecadaha aan lagu qaali-garayn dadka danyarta ah. Waxaan rajeynaynaa Insha’Allahu tacaalaa in kulamo keli keli ah aan la yeelan doono ganacsatada iyo dadka wax la soo degga, qorshahaas xalay illaa haataan waan wadnay. Insha’Allah go’aano mideysan baan rabnaa inaan ka soo saarno, oo anaga, ganacsatada iyo rugta ganacsiga Puntland aan ku wada mideysanahay.” Ayuu yiri Duqa Boosaaso oo la hadlay VOA.
Sicir bararkan ka jira Magaalada Boosaaso ayaa ku soo aadaya, iyadoo 1dii bishii March ay Wasaaradda Maaliyadda Puntland kordhisay canshuurtii ganacsatada laga qaadi jiray, waxa kaloo ay tani ku soo beegmaysaa, xilli shacabka Soomaaliyeed ay isu diyaarinayan soo dhawaynta bisha barakeysan ee soon-qaad.
Ra’iisal Wasaaraha XF Soomaaliya, Xasan Cali Khayre oo 21-kii bishii hore ee March la kulmay ganacsatada qaarkood ayaa kaga digay in ay kordhiyan qiimihii wax la kala siisan jiray, iyagoo markaasi ka faa’iideysanaya Coronavirus.
← UN expresses its readiness to Somalia fight against COVID-19
Ra’iisul wasaarihii hore ee Somaliya ‘Nuur Cadde’ oo u geeriyooday Cudurka Coronavirus →
August 23, 2019 August 23, 2019 HalQaran Staff 0
January 28, 2020 HalQaran Staff 0
October 8, 2019 October 7, 2019 Weriye Ahmed Abdi 0